DHAMMA VADI AUNG MYAY MINGALAR MONASTERY: ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ
ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ
၄ဝ။ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီး ဆောင်ပုဒ်များ
၁။ ဟေတုပစ္စယော၊ အမြစ်မှဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁) လောဘ, ဒေါသ, မောဟ၊ အလောဘ, အဒေါသ, အမောဟ၊ ဤဟိတ် ၆-ပါး
ကဟေတုပစ္စည်း၊ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့်စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
ပစ္စည်းဆိုတာက အကြောင်းတရား၊ ပစ္စယုပ္ပန်ဆိုတာက အကျိုးတရား၊
၂။ အာရမ္မဏပစ္စယော၊ အာရုံဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂) အာရုံ ၆-ပါးက အာရမ္မဏပစ္စည်း၊ အာရုံûပတဲ့ စိတ်နာမ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
၃။ အဓိပတိပစ္စယော၊ အကြီးအကဲဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၃) လွန်ကဲသော ဆန္ဒ, ဝီရိယ, စိတ်, ပညာ၊ ဤလေးပါးတွင် တစ်ပါးပါးက
အဓိပတိပစ္စည်း။ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့်စိတ္တဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
(၄) အလေးûပခံရတဲ့အာရုံက အာရမ္မဏာဓိပတိပစ္စည်း။ အလေးûပတဲ့ စိတ်နာမ်ကပစ္စ
၄။ အနန္တရပစ္စယော၊ အခြားမဲ့ဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
၅။ သမနန္တရပစ္စယော၊ ကောင်းစွာအခြားမဲ့ဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၅) ရှေးရှေး စိတ်နာမ်များက အနန္တရ, သမနန္တရ, နတ္ထိ, ဝိဂတပစ္စည်း၊နောက်နောက်
၆။ သဟဇာတပစ္စယော၊ ûပိင်တူဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
၇။ အညမညပစ္စယော၊ အပြန်အလှန်ကျေးဇူးûပသောတရား။
၈။ နိဿယပစ္စယော၊ မှီရာဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၆) နာမ်တရားများအချင်းချင်း၊ မဟာဘုတ် ၄-ပါးအချင်းချင်း၊ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် ဝတ္ထု
ရုပ်အချင်းချင်း၊ သဟဇာတ, အည မည, နိဿယပစ္စည်း, ပစ္စယုပ္ပန်။
(၇) စိတ်နာမ်များက သဟဇာတ, နိဿယပစ္စည်း၊ စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်က
(၈) မဟာဘုတ် ၄-ပါးက သဟဇာတ, နိဿယပစ္စည်း၊ ဥပါဒါရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
(၉) မျက်စိ, နား, နှာ, လျှာ, ကိုယ်နှင့်ဝတ္ထုရုပ်တို့က နိဿယပစ္စည်း၊ မြင်တာ,ကြားတာ,
နံတာ, စားတာ, ထိတာ, သိတာက ပစ္စယုပ္ပန်။
၉။ ဥပနိဿယပစ္စယော၊ အားကြီးသော အကြောင်းဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁ဝ) စွဲမှီရာ ရှေးကာလစိတ်နာမ်များက ပကတူပနိဿယပစ္စည်း၊ စွဲမှီ၍ဖြစ်သော နောက်
(၁၁) ဥတု, ဘောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်, နေရာစသည်က ပကတူပနိ ဿယပစ္စည်း၊ ¤င်းတို့ကိုစွဲမှီ၍
ဖြစ်သော စိတ်နာမ်များက ပစ္စယုပ္ပန်၊ (အာရမ္မဏူပနိဿယ, အနန္တရူပနိဿယ
တို့မှာ နံပါတ် (၄-၅) အပိုဒ်တို့နှင့်တူပြီ။)
၁ဝ။ ပုရေဇာတပစ္စယော၊ ရှေးဦးစွာ ဖြစ်နှင့်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၂) မျက်စိစသောမှီရာရုပ်-၆-ပါးက ဝတ္ထုပုရေဇာတ ပစ္စည်း။ မြင်မှုစသော ရုပ်နာမ်-၆
(၁၃) အဆင်းစသော အာရုံ ၅-ပါးက အာရမ္မဏပုရေဇာတပစ္စည်း၊ မြင်မှုစသော
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော၊ နောက်မှဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၄) နောက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်နာမ်များက သဟဇာတပစ္စည်း။ ရှေးကဖြစ်နှင့်
သော တစ်ကိုယ်လုံးရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
၁၂။ အာသေဝနပစ္စယော၊ အထုံပါစေ၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၅) ရှေးရှေးဇောက အာသေဝနပစ္စည်း။ ဖိုလ်မှတပါး နောက်နောက်ဇောက ပစ္စ
၁၃။ ကမ္မပစ္စယော၊ ûပမှုဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၆) စေတနာက ကမ္မပစ္စည်း၊ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့် စိတ္တဇပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်က
(၁၇) ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စေတနာက နာနက္ခဏိက ကမ္မပစ္စည်း၊ အကျိုးဝိပါက်က
၁၄။ ဝိပါကပစ္စယော၊ အကျိုးဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၈) ဝိပါက်စိတ်နာမ်က ဝိပါကပစ္စည်း၊ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့် စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေ
၁၅။ အာဟာရပစ္စယော၊ အားသစ်ပေး၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၁၉) သြဇာရုပ်က အာဟာရပစ္စည်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
(၂ဝ) ဖဿ, စေတနာ, ဝိညာဉ်က အာဟာရပစ္စည်း၊ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့်စိတ္တဇရုပ်,
၁၆။ ဣန္ဒြိယပစ္စယော၊ အုပ်စိုး၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၁) မျက်စိ, နား, နှာ, လျှာ, ကိုယ်၊ ဤကိုယ်ငါးပါးက ဣန္ဒြိယပစ္စည်း၊ မြင်မှုစ
သော စိတ်နာမ်ငါးပါးက ပစ္စယုပ္ပန်။
(၂၂) ဇီဝိတခေါ် အသက်ရုပ်က ဣန္ဒြိယပစ္စည်း၊ တွဲဘက်ကမ္မဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
(၂၃) ဇီဝိတခေါ် အသက်နာမ်နှင့်စိတ်, ဝေဒနာ, သဒ္ဓါ, ဝီရိယ, သတိ, သမာဓိ,
ပညာ, ဤရှစ်ပါးက ဣန္ဒြိယပစ္စည်း၊ ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့် စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေ
ကမ္မဇ ရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
၁၇။ ဈာနပစ္စယော၊ ရှု၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၄) ဝိတက်, ဝိစာရ, ပီတိ, သုခ, ဧကဂ္ဂတာ၊ ဤဈာနင်ငါးပါးက ဈာနပစ္စည်း။
ယှဉ်ဘက်နာမ်နှင့် စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
၁၈။ မဂ္ဂပစ္စယော၊ ရောက်စေ၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၅) မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ, သမ္မဒိဋ္ဌိစသော မဂ္ဂင်တရားကိုယ် ၉-ပါးက မဂ္ဂပစ္စည်း။ ယှဉ်ဘက်
နာမ်နှင့် စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော၊ ယှဉ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၆) စိတ်စေတသိက် အချင်းချင်း သမ္ပယုတ္တပစ္စည်း၊ ပစ္စယုပ္ပန်။
၂ဝ။ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော၊ မယှဉ်ပဲကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၇) စိတ်နာမ်များက ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စည်း၊ စိတ္တဇရုပ်, ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်က ပစ္စယုပ္ပန်။
(၂၈) ပုရေဇာတဝိပ္ပယုတ်မှာ ဝတ္ထုပုရေဇာတနှင့်တူပြီ၊ ပစ္ဆာဇာတဝိပ္ပယုတ်မှာ ပစ္ဆာ
၂၁။ အတ္ထိပစ္စယော၊ ရှိဆဲဖြစ်၍ ကျေးဇူးûပသောတရား၊
၂၂။ နတ္ထိပစ္စယော၊ မရှိမူ၍ ကျေးဇူးûပသောတရား၊
၂၃။ ဝိဂတပစ္စယော၊ ချုပ်ကင်း၍ ကျေးဇူးûပသောတရား၊
၂၄။ အဝိဂတပစ္စယော၊ မချုပ်ကင်းမူ၍ ကျေးဇူးûပသောတရား။
(၂၉) အတ္ထိ, အဝိဂတတို့မှာ သဟဇာတ, ပုရေဇာတ ပစ္ဆာဇာတ, ရုပ်အာဟာရ ရုပ်
(၃ဝ) နတ္ထိ, ဝိဂတတို့မှာ အနန္တရနှင့်တူပြီ။
(၁၃၂၁-ခု ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံးဟောသည်။ အချို့ဆောင်ပုဒ်၌ သုတနည်းသူတို့ သိလွယ်, မှတ်လွယ်ရုံမျှ ပြထား
သည်။ အတိအကျ အပြည့်အစုံကားမဟုတ်)။
သြကာသ, သြကာသ, သြကာသ ကာယကံ, ဝစီကံ, မနောကံတည်းဟူသော အပြစ်ခပ်သိမ်း ပပျောက်ငြိမ်း၍
အသက်ရှည်စွာ အနာမဲ့ရေး ရန်ဘေးကင်းကြောင်း ကောင်းမှုမဂ်လာ ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ဘုရားရတနာ, တရားရတနာ,
သံဃာရတနာတည်းဟူသော ရတနာမြတ်သုံးပါး၊ (ဆရာသမား)တို့ကို အရိုအသေ လက်အုပ်မိုး၍၊ ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမြော်မာန်
လျှော့ ကန်တော့ပါ၏ (အရှင်ဘုရား)။
(ဆုပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလျှင် ဤတွင်ရပ်ပါ)
ဆုပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလျှင် အောက်ပါဆုတောင်းကို
ကန်တော့ရသော ဤကောင်းမှုကံ စေတနာတို့ကြောင့် အပါယ် ၄-ပါး, ကပ် ၃-ပါး, ရပ်ပြစ် ၈-ပါး, ရန်သူမျိုး ၅-
ပါး, ဝိပတ္တိတရား ၄-ပါး, ဗျသနတရား ၅-ပါး, အနာမျိုး ၉၆-ပါး, မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂-ပါးတို့မှ အခါခပ်သိမ်း ကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်
သာဖြစ်၍ မဂ်တရား, ဖိုလ်တရား, နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို လျင်မြန်စွာ ရလိုပါ၏ (အရှင်ဘုရား)။
မှတ်ချက်။ ။ ဤကန်တော့ခန်း၌ (ဆရာသမား) ဟူသော ဤစကားမှာ ဆရာသမားတို့ကို ကန်တော့သောအခါ၌ ထည့်ဆိုရန်
ဖြစ်သည်၊ မိခင်, ဖခင်စသည်တို့ကို ကန်တော့သော အခါများ၌မူကား မိခင် ဖခင်၊ အဘိုး, အဘွား၊ ဦးကြီး, အရီး၊ အဒေါ်
စသည်ဖြင့် ဆိုင်ရာ, ဆိုင်ရာတို့ကို လဲလှယ်၍ ထည့်သွင်း၍ ဆိုရမည်။
(အရှင်ဘုရား) ဟူသော စကားမှာလည်း ရတနာသုံးပါး ရဟန်းသံဃာတို့ကို ကန်တော့သော အခါ၌သာ ဆိုရန်ဖြစ်
မဟာစည်ခေါ်, ဆရာတော်, ထွန်းပေါ်ထင်ရှားသည်။
သတိပဋ္ဌာန်, ကျင့်လမ်းမှန်, ထုတ်ပြန်ဟောကြားသည်။
ကျမ်းပေါင်းများစွာ, စီရင်ကာ, သာသနာûပနေသည်။
ဆဋ္ဌသင်္ဂါ, တင်စဉ်မှာ, သြသာဝန်ဆောင်သည်။
ပါဠိမေးကာ, ဋ္ဌကထာ, ဋီကာစီစစ်သည်။
အရှင်သောဘန, ပဏ္ဍိတ, အဂ္ဂမဟာထေရ်။
ဝိသုဒ်မြန်မာ, ကျမ်းရွှေစာ, ချောစွာရေးခဲ့သည်။
တစ်ထောင့်သုံးရာ, သုံးခြောက်မှာ, ပ-ဝါကွယ်တိတိ။
ဘေးရန်ကင်းကွာ, ဤကျမ်းစာ, ကောင်းစွာပြီးမြောက်သည်
ထိုနည်းတူစွာ, များသတ္တာ, ဘေးကွာရန်ကင်းကြပါစေ။
အပြစ်ကင်းပ, ကြံသမျှ, ပြည့်ဝအောင်မြင်ကြပါစေ။
မေတ္တာ, ကရုဏာ, မုဒိတာ, ပွားကာချမ်းသာကြပါစေ။
ထူးသူတွေမှာ, ဤကျမ်းစာ, ဖတ်ကာနားလည်ကြပါစေ။
နားလည်ပြီးပြန်, ကျင့်လမ်းမှန်, ကျင့်ကြံပေါက်ရောက်ကြပါစေ။
မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်, ချမ်းသာမှန်, အမြန်သိမြင်ကြပါစေ။
သို့နှင့်မြတ်စွာ, သာသနာ, ရောင်နေဝါသို့ထွန်းစေသော်။
၁။ ဘုရားတရား, သံဃာအား, ညွတ်တွားရှိဦးတင်။
၂။ ထိုခိုက်ဖြစ်လတ်, ရုပ်နာမ်ဓာတ်, ရှုမှတ်သိမြင်လျှင်။
၃။ ဝိသုဒ်မဂ္ဂါ, မြတ်ကျမ်းစာ, မြန်မာပြန်စီရင်။
၄။ ကျိုက်ထိုဆရာ, ûပခဲ့ပါ, မြန်မာဝိသုဒ်ကျမ်း။
၅။ မြန်စာတတ်က, ကြည့်ခွင့်ရ, ကောင်းစွထိုသည့်ကျမ်း။
၆။ သို့သော်နိသျှ, အတိုင်းပြ, ဝါကျမဖြောင့်တန်း။
၇။ နိသျှဆောင်နက်, ရောထွေးယှက်, သိခက်မူရင်းကျမ်း။
၈။ ပါဠိမတတ်, ယင်းကျမ်းဖတ်, ခက်လတ်အခန်းခန်း။
၉။ ထိုကျမ်းရှုသူ, အများလူ, ညည်းညူမရွှင်လန်း။
၁ဝ။ ထို့ကြောင့်လွယ်စွာ, သိစိမ့်ငှါ, မြန်မာပြန်သစ်ကျမ်း။
၁၁။ မူရင်းတိကျ, ဋီလည်းပြ, ရှင်းစွ, မရြော>ွပမ်း။
၁၂။ ရေးစီရင်လတ်, လူတိုင်းဖတ်, စိတ်ဓာတ်ကြည်ရွှင်လန်း။
၁၃။ သဘောÓဏ်ပေါက်, လမ်းမှန်လျှောက်, ဆိုက်ရောက်, နိဗ္ဗာန်နန်း။
၁။ ရူပံဤရုပ်, ရေမြှုတ်သဏ္ဍာန်, အနိစ္စပဲ မမြဲအမှန်။
ဖြစ်ပျက်မစဲ, ဆင်းရဲပူပန်, အနတ္တ မှတ်ကြဧဝကန်။
၂။ ဝေဒနာစက်, ရေပွက်သဏ္ဍာန်, အနိစ္စပဲ မမြဲအမှန်။
၃။ သညာအမှတ်, တံလှပ်ပုံဟန်, အနိစ္စပဲ မမြဲအမှန်။
၄။ ငှက်ပျောတူစွာ, သင်္ခါရက္ခန်, အနိစ္စပဲ မမြဲအမှန်။
၅။ ဘဝင်ဆင်ခြင်, မြင်ပြီးလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ။
၆။ စုံစမ်းဆုံးဖြတ်, ဇောစိတ်-သတ်, ၂-ရပ်တဒါရုံ။
၇။ အဆင်းမြင်လျှင်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်။
၈။ ဆင်ခြင်ပြီးခါ, ဇောတဒါ, ကြံရာစိတ်ဖြစ်ပုံ။
၉။ ကြား, နံ, စား, ထိ, မြင်တူ၏, မှတ်ဘိစိတ်ဖြစ်ပုံ။
၁ဝ။ မြင်လျှင်မြင်ခြင်း, လက်ငင်းမှတ်လျှင်၊
၁၁။ မျက်လှည့်အလား, သိမှားဝိညာဏ်၊
၁၃။ ချမ်းသာဆင်းရဲ, ရှုမြဲတူညီ၊
သင်္ခါရု, ညီမှု ဂုဏ်သုံးမည်။
၁၄။ ကြာရှည်စွာလဲ, တည်မြဲသူတည်။
သင်္ခါရု, ထူးမှု ဂုဏ်သုံးမည်။
ပရိယတ် ပဋိပတ်, နှစ်ရပ်စုံညီ၊
၁။ သင်္ချေလေးရပ်, သိန်းကပ်ကြာရှည်၊
၂။ သတ္တဝါများ, သနားသလိုပင်၊
၃။ ထီးတခွန်လဲ, လွန်ကဲထူးလျှင်၊
မူလ ပုဗ္ဗ, အရိယ သုံးဝမဂ္ဂင်မြတ်၊
ဖြစ်ပွားစေလျှင်, ထိုမဂ္ဂင် ပြေးဝင်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်။
၄။ ''သစ္စာမမြင်, မဂ္ဂင်မပါ၊
၅။ ''မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ, မရှိရာ, ကိလေသာငြိမ်းသူမရှိချေ။
''မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ, ရှိရာမှာ, ကိလေသာငြိမ်းသူရှိနိုင်ပေ။
၆။ မျက်စိမှီယင်း, အဆင်းမြင်သည်၊
မြင်သိ၌, သိထိုက် ဤသုံးမည်။
၇။ ဘဝင်ဆင်ခြင်, မြင်ပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
စုံစမ်းဆုံးဖြတ်, ဇောစိတ်သတ်, နှစ်ရပ်တဒါရုံ၊
အဆင်းမြင်လျှင်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်။
ဆင်ခြင်ပြီးခါ, ဇောတဒါ, ကြံရာစိတ်ဖြစ်ပုံ၊
ထင်ဆဲဆင်းဓာတ်, မြင်လတ်ဦးစွာ, မြင်ပြီးတရား
စဉ်းစားပြန်ရာ, သန္တန်ဒြပ်, ပညတ်ပေါ်လာ၊
မည်နာမ, သိရ နောက်ဆုံးမှာ။
၈။ ဘဝင် ဆင်ခြင်, မြင်သိလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ၊
ဘဝင် ဆင်ခြင်, ကြားသိလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ၊
ဘဝင် ဆင်ခြင်, နံသိလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ၊
ဘဝင် ဆင်ခြင်, စားသိလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ၊
ဘဝင် ဆင်ခြင်, တွေ့သိလျှင်, ထို့ပြင်လက်ခံတုံ၊
၉။ (က) မြင်သိစိတ်စဉ်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်
(ခ) ကြားသိစိတ်စဉ်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်
(ဂ) နံသိစိတ်စဉ်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်
(ဃ) စားသိစိတ်စဉ်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်
(င) တွေ့သိစိတ်စဉ်, ဖြစ်ရိုးပင်, စိတ်စဉ်မှတ်ပါကုန်
၁ဝ။ ''ထင်ဆဲစဉ်းစား, မြင်ကြားစစွာ''
''ဆင်ခြင်ပြီးကာ, ဇောတဒါ, သိလာစိတ်ဖြစ်ပုံ။
၁၁။ ဘဝင်ဆင်ခြင်, မြင်ပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
၁၂။ ဘဝင်ဆင်ခြင်, ကြားပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
ဘဝင်ဆင်ခြင်, နံပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
ဘဝင်ဆင်ခြင်, စားပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
ဘဝင်ဆင်ခြင်, တွေ့ပြီးလျှင်၊ ထိုပြင်, လက်ခံတုံ။
ကြား, နံ, စား, သိ, မြင်တူ၏, မှတ်သိစိတ်ဖြစ်ပုံ။
ဆင်ခြင်ပြီးခါ, ဇောတဒါ, ကြံရာစိတ်ဖြစ်ပုံ။
၁၃။ မြင်လျှင်မြင်ခြင်း, လက်ငင်းမှတ်လျှင်၊
(၁) ပ, အာ, တေ, ဝါ, ရုပ်လေးဖြာ, မှတ်ပါမဟာဘုတ်။
(၂) မျက်စိ, နား, နှာ, ကိုယ်, လျှာ, ငါးဖြာအကြည် ရုပ်။
(၃) ဆင်း, သံ, နံ့မှာ အရသာ တွေ့တာအာရုံရုပ်။
(၄) အတွေ့ဆိုတာ ပ,တေ,ဝါ, သုံးဖြာမဟာဘုတ်။
(၅) ဖိုမဖြစ်စေ-ရုပ်နှစ်ထွေ, မှတ်လေဘာဝရုပ်။
(၆) အသက်-အာဟာရ ဟဒယ, သုံးဝသီးခြားရုပ်။
(၇) ဘုတ်လေး ကြည်ငါး, အာရုံငါး နှစ်ပါးဘာဝရုပ်။
(၈) သီးခြားသုံးပါး, ဆယ့်ရှစ်ပါး သဘာဝရုပ်မည်။
(၉) သဘာဝရုပ်ဓာတ် ပရမတ် ဝိပဿ်ရှုရမည်။
(၁ဝ)ြ<ွကင်းရုပ်ဆယ်ဖြာ ပညတ်သာ, ရှုစရာမလိုပြီ။ (၁၁) အာကာသဓာတ် နှစ်ဝိညတ်, ပေါ့လတ်နုခံသည်။ (၁၂) ဖြစ်ပွားရင့်လတ်, သေပျက်မှတ်, ပညတ်ရုပ်ဆယ်မည်။ (၁၃) ဆင်း နံ့ ရသာ, ဘုတ်လေးဖြာ သြဇာဋ္ဌကလာပ်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၅၃ (၁၄) အသက်နှင့်တကွ-ထိုအဋ္ဌ-နဝရုပ်ကလာပ်။ (၁၅) အကြည်ဘာဝ, ဟဒယ, ဒသရုပ်ကလာပ်။ (၁၆) အသံနှင့်တကွ, ထိုအဋ္ဌ-နဝရုပ်ကလာပ်။ (၁၇) ထိုရှစ်ကိုးမှာ, ဝိညတ်ပါ, ကိုးဖြာဆယ်ကလာပ်။ (၁၈) ပေါ့ နု ခံ ပါ, ပါဝင်ရာ, ဆယ့်တစ်ဖြာ-စသည်မှတ်။ (၁၉) ''ကမ္မဇကိုး, စိတ်ခြောက်မျိုးနှင့်, လေးမျိုးဥတု, နှစ်ခုအာဟာ, ပေါင်းယူရာ, ကလာပ်နှစ်ဆယ့်တစ်, ဝိညတ်ဆိုင်ရာ, ကလာပ်မှာ, စိတ်သာဖြစ်ကြောင်းမှတ်, ပေါ့ နု ခံ သာ, ဝိညတ်ပါ,ြ<ွကင်းမှာမရှိပါ, ဂဗ္ဘသေယျာ, သန္ဓေမှာ, ကာ, ဘာဝတ်သုံးမည်, သံသေသြပ ပတ်, ပြည့်စုံလတ် ကလာပ်ခုနှစ်မည်။'' ၄။ ဘာရသုတ္တန် တရားတော်ကြီး ဆောင်ပုဒ်များ ၁။ ငါ ငါ့ဥစ္စာ, စွဲနိုင်တာ, ဥပါဒါနက္ခန်။ ရုပ် ဝေ သညာ, သင်္ခါရာ, ဝိညာဤငါးတန်။ ၂။ ထင်လွဲသာယာ, စွဲလမ်းတာ, နှစ်ဖြာ ဥပါဒန်။ ရုပ် ဝေ သညာ, သင်္ခါရာ, ဝိညာဤငါးတန်။ ၃။ ဈာန်ရလှူလေ, အကျိုးတွေ, ကုဋေတစ်သိန်းဆို။ သောတာလောင်းပင်, လှူလေလျှင်, များဖြင့် အသင်္ချေဆို။ နောက်ကိုးပါးဝယ်, ကျိုးများတယ်, ပြောဖွယ်မရှိဆို။ ၄။ မာနကြီးက မျိုးညံ့ရ, နှိမ့်ချ မျိုးမြတ်သည်။ ၅။ ကာမတဏှာ, ကောင်းနိုးရာ, သာယာနှစ်သက်မှု။ ၆။ ဝိဘဝမှာ, ဥစ္ဆေဒါ, ထင်ကာနှစ်သက်မှု။ ၇။ ရုပ်နာမ်အစု, ငါကောင်ဟု, ထင်မှုမရှိပါ။ ၈။ ဘုရားတရား, သံဃာအား, ယုံမှားမရှိပါ။ ၉။ ဝန်ထုတ်ကို, ခံယူတယ်ဆိုတာ, ဘယ်ဟာလဲ? နှစ်သက်လိုချင်တဲ့ တဏှာပဲ။ ၁ဝ။ ဝန်ထုတ်ကို ပစ်ချတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာလဲ? နှစ်သက်လိုချင်တဲ့ တဏှာကိုပယ်တာပဲ။ ၁၁။ ဝန်ထုတ်ဆိုတဲ့, ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ, ငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာ။ ၁၂။ ဝန်ထုတ်ကို ခံယူတယ်ဆိုတဲ့, တဏှာက သမုဒယသစ္စာ။ ၁၃။ ဝန်ထုတ်ကို ပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့, တဏှာချုပ်ငြိမ်းတာက နိရောဓသစ္စာ။ ၁၄။ တဏှာချုပ်ငြိမ်းကြောင်း အကျင့်ဖြစ်တဲ့ ဝိပဿနာနှင့် မဂ်လေးပါးက မဂ္ဂသစ္စာ။ ၁၅။ ဝန်ထုတ်ဆိုတာ, ငါးခန္ဓာ, လွန်စွာလေးလှသည်။ ၁၆။ ဝန်ထမ်းခေါ်လတ်, ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်, ပညတ်သာဖြစ်သည်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၅၄ ၁၇။ ဝန်ကိုယူက, ဆင်းရဲစွ, ပယ်ချချမ်းသာသည်။ ၁၈။ မြစ်ရင်းပါဖျက်, တပ်မက်ပယ်လျှင်, ဆာလောင်တောင်းတ, လုံးဝကင်းစင်။ ၁၉။ ဝန်ဟောင်းစွန့်ပစ်, ဝန်သစ်မတင်, ပူခပ်သိမ်း အေးငြိမ်း နိဗ္ဗာန်ဝင်။ လေးလံတဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဆိုတာ ဘယ်ဟာလဲ? ငါ ငါ့ဥစ္စာလို့ ထင်ရတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးတရားပဲ။ ဝန်ထမ်းသမားဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ခန္ဓာငါးပါးရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ ဝန်ထုတ်ကို ခံယူတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? နှစ်သက်လိုချင်တဲ့ တဏှာပဲ။ ဝန်ထုတ်ကိုပစ်ချတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာလဲ? နှစ်သက်လိုချင်တဲ့ တဏှာကိုပယ်တာပဲ။ ဝန်ထုတ်ဆိုတာ ငါးခန္ဓာ, လွန်စွာလေးလှသည်။ ဝန်ထမ်းခေါ်လတ်, ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်, ပညတ်သာဖြစ်သည်။ ဝန်ကိုယူက, ဆင်းရဲစွ, ပယ်ချချမ်းသာသည်။ မြစ်ရင်းပါဖျက်, တပ်မက်ပယ်လျှင်၊ ဆာလောင် တောင်းတ, လုံးဝကင်းစင်။ ဝန်ဟောင်းစွန့်ပစ်, ဝန်သစ်မတင်၊ ပူခပ်သိမ်း အေးငြိမ်း နိဗ္ဗာန်ဝင်။ ၅။ စူဠဝေဒလ္လသုတ် တရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ ကာမတဏှာ ကောင်းနိုးရာ ထင်ကာနှစ်သက်မှု။ ဘဝတဏှာ သဿတာ ထင်ကာနှစ်သက်မှု။ ဝိဘဝမှာ ဥစ္ဆေဒါ ထင်ကာနှစ်သက်မှု။ သက္ကာယဖြစ်ရန် အကြောင်းမှန် သုံးတန်တဏှာစု။ တဏှာချုပ်က သက္ကာယ ဒုက္ခအငြိမ်းမှန်။ မူလ ပုဗ္ဗ, အရိယ, သုံးဝမဂ္ဂင်မြတ်။ ဖြစ်ပွားစေလျှင်, ဤမဂ္ဂင်, ပြေးဝင်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်။ ဖြစ်ဖြစ်သမျှ သင်္ခါရ ဒုက္ခသစ္စာတည်း။ သင်္ခါရတွင် အကောင်းထင် ခင်မင်သမုတည်း။ ရုပ်နာမ်အားလုံး ဖြစ်ပျက်သုံး ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်း။ ဆင်းရဲငြိမ်းရာ ဆိုက်ရောက်တာ သစ္စမဂ္ဂင်တည်း။ ကြံစည်စဉ်းစား နှစ်သိမ့်ပွား ကောင်းစားချမ်းသာတည်း။ ရှုရာရာတွင် စူးစိုက်ဝင် ငါးအင်ပဈာန်မည်။ နှစ်သိမ့်ချမ်းသာ စူးစိုက်ကာ သုံးဖြာဒုဈာန်မည်။ ချမ်းသာမှုနှင့် စူးစိုက်လင့် သုံးဆင့်ဈာန်ခေါ်သည်။ ဥပေက္ခာနှင့် စူးစိုက်လင့် လေးဆင့်ဈာန်ခေါ်သည်။- စသည့်-တရားအနှစ်ချုပ် ဆောင်ပုဒ်လင်္ကာများဖြင့်လည်း ကောင်းမွန်လှပေ၏။ ဓမ္မဒါယာဒသုတ် တရားတော် ဆောင်ပုဒ် ၁။ ဓမ္မဒါယာ သုတ်မြတ်မှာ မြတ်စွာဟောမိန့်သည်။ ၂။ ငါ့တပည့်တွေ တရားအမွေ ခံစေခြင်လှသည်။ ၃။ အာမိသမွေ ပစ္စည်းတွေ ပယ်စေခြင်လှသည်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၅၅ ၄။ တရားအမွေ အစစ်ပေ ကိုးထွေလောကုတ်ပါ။ ၅။ နိဗ္ဗာန်ရည်ငြား, ကုသိုလ်များ, တရားမွေတုပါ။ ၆။ စစ်တုနှစ်ထွေ တရားမွေ ခံစေလိုလှသည်။ ၇။ အာမိသအမွေ အစစ်ပေ လေးထွေပစ္စည်းပါ။ ၈။ လူ, နတ်သုခ ရည်သန်က ဒါန သီလပါ။ ၉။ အာမိသမွေ အတုတွေ မှတ်လေမွေညံ့သာ။ ၁ဝ။ ပစ္စည်းမွေမျှ ခံယူက ဒုက္ခမကင်းပါ။ ၁၁။ ထပ်တလဲလဲ, အိုမစဲ, ဆင်းရဲနေကြမှာ။ ၁၂။ ထပ်တလဲလဲ, နာမစဲ, ဆင်းရဲနေကြမှာ။ ၁၃။ ထပ်တလဲလဲ, သေမစဲ, ဆင်းရဲနေကြမှာ။ ၁၄။ ထပ်တလဲလဲ, ပါယ်ငရဲ, ကျမြဲနေကြမှာ။ ၁၅။ သင်တို့နောင်ရေး, ငါမျှော်တွေး, ဝန်လေးသနားပါ။ ၁၆။ ထို့ကြောင့်အများ, တပည့်သား, ဘုရားတောင်းပန်သည်။ ၁၇။ ငါ့တပည့်တွေ တရားအမွေ ခံစေခြင်လှသည်။ ၁၈။ အာမိသမွေ ပစ္စည်းတွေ ပယ်စေခြင်လှသည်။ ပစ္စည်းအမွေ ၁၉။ ပစ္စည်းမျှပင်, ခံယူလျှင်, လူရှင်ဆိုကြမှာ။ ၂ဝ။ ဘုရားသားတွေ, ပစ္စည်းမွေ, ခံနေရုံမျှသာ။ ၂၁။ ဆွမ်းဘုန်းပြီးခါ, ဘုရားမှာ, များစွာဆွမ်းကျန်သည်။ ၂၂။ ရဟန်း ၂-ပါး, ဆာလောင်များ, ဘုရားထံရောက်သည်။ ၂၃။ ဘုရားဆွမ်းကျန်, သုံးဆောင်ရန်, ဖိတ်မန်ခွင့်ûပသည်။ ၂၄။ တစ်ပါးသာစား, ကျန်တစ်ပါး, ပယ်ရှားကျင့်သုံးသည်။ ၂၅။ ပယ်ရှားသူသာ, ကျိုးများမှာ, မြတ်စွာချီးကြူးသည်။ ၂၆။ ဤသို့မြတ်စွာ, ပုံဆောင်ကာ, သာယာဆုံးမသည်။ ၂၇။ ဘုရားစကား, တို့အများ, လေးစားကျင့်ထိုက်သည်။ ၂၈။ လေးစားသူမှာ, ဆင်းရဲကွာ, ချမ်းသာရပေသည်။ ဝိဝေကသုံးပါး-အကျင့်ပျက် ၁။ ဆိတ်ငြိမ်တရား, မြတ်ဘုရား, ပွားများထာဝစဉ်၊ ၂။ တပည့်တို့အား, ထိုတရား, မပွားလိုက်လျှင်၊ ၃။ ပယ်ရန်ညွှန်ကြား, တရားများ, ပယ်ရှားမûပလျှင်၊ ၄။ ပစ္စည်းများရေး, အလေးပေး, ကျင့်ရေးလျော့ပေါ့လျှင်၊ ၅။ ဆုတ်ရန်ရှေ့သွား, ကျင့်ရန်ကား, ချထားဝန်ရှိလျှင်၊ ၆။ ထေရ်ကြီး, လတ်, ငယ်, ကဲ့ရဲ့ဖွယ်, သုံးစွယ်ငြိစွန်းသည်၊ ၇။ ဆိတ်ငြိမ်တရား, တပည့်များ, ကျင့်ပွားနေကျလျှင် ၈။ ပယ်ရန်ညွှန်ကြား, တရားများ, ပယ်ရှားကြလေလျှင် ၉။ ပစ္စည်းများရန်, မရည်သန်, ကျင့်ရန် မလျှော့လျှင်၊ ၁ဝ။ ဆိတ်ငြိမ်ကျင့်ရေး, ရှေ့ဆောင်ပေး, ဆုတ်ရေးပယ်ရှားလျှင်၊ ၁၁။ ထေရ်ကြီး လတ် ငယ်, ချီးမွမ်းဖွယ်,သုံးသွယ်ပြည့်စုံသည်။ မဒတရား ၂၇-ပါး ၁။ မျိုးနွယ်နာကင်း, ပျိုနုခြင်း, လွန်မင်းသက်ရှည်စွာ၊စွဲမှီûပလျင်း, မာန်ယစ်ခြင်း, မယွင်းဖြစ် တတ်ပါ၊ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၅၆ ၂။ လာဘ်သက္ကာရ, လေးûပကြ, ဖြစ်ရရှေ့ဆောင်ပါ၊စွဲမှီûပလျင်း, မာန်ယစ်ခြင်း, မယွင်းဖြစ် တတ်ပါ၊ ၃။ြေ>ွခရံဘောဂ, ရုပ်ဆင်းလှ, သုတ ပဋိဘာ၊စွဲမှီûပလျင်း, မာန်ယစ်ခြင်း, မယွင်းဖြစ်တတ်ပါ၊
၄။ သက်ကြီးပိဏ္ဍ, ယာပထ, ယသ ပြီးမြောက်တာ၊စွဲမှီûပလျင်း, မာန်ယစ်ခြင်း, မယွင်းဖြစ်
၅။ သီလဈာန, တတ်သိပ္ပ, ညီမျှသုံးရပ်ပါ၊စွဲမှီûပလျင်း, မာန်ယစ်ခြင်း, မယွင်းဖြစ်တတ်ပါ၊
၁။ ဒုစရိုက်သုံးပါး, ကာမငါး, စိတ်သွားစေဖို့ လွှတ်ထားလျှင်၊
သွားလာသောက်စား, ပျော်နေငြား, သူအား မေ့လျော့ ခေါ်သည်ပင်၊
၂။ ကုသိုလ်တရား, ပွားဖို့ကား, လေးစား ကောင်းစွာ မûပလျှင်၊
သွားလာသောက်စား, ပျော်နေငြား, သူအား မေ့လျော့ ခေါ်သည်ပင်။
၃။ မပြတ်မပွား, စိတ်လျော့ငြား, လိုလားဓုရ ချထားလျှင်၊
၄။ မမှီဝဲငြား, မပွားများ, အားပါးမထုတ် နေခဲ့လျှင်၊
၇။ မဟာသမယသုံးသုတ် တရားတော်မှ
၁။ ချစ်ဖွယ်လောဘ, ထိုနှစ်ဝ၊ဆန္ဒ လိုချင်မှုကြောင့်ပင်။
၂။ လူ၏မှီရာ, အကျိုးမှာ၊အာသာပြီးကြောင်း ¤င်းပင်။
၃။ သာယာစဖွယ်, ရွံမုန်းဖွယ်၊မှီတွယ်ဆန္ဒ, ဖြစ်ပေါ်သည်။
၄။ ရုပ်ဝတ္ထုတွင်, ဖြစ်ပျက်မြင်၊လိုချင်စွဲမှတ်, ဆုံးဖြတ်သည်။
၅။ သာယာမုန်းဖွယ်, ထိုနှစ်သွယ်၊ဖြစ်တယ်, ဖဿကြောင့်ပေတည်း။
၆။ တည်မြဲပြတ်စဲ, ယူဆစွဲ၊ဒါလဲ ဖဿကြောင့်ပေတည်း။
၇။ ရုပ်နာမ်နှစ်ခု, စွဲမှီûပ၊တွေ့မှု ဖဿဖြစ်ပေါ်သည်။
၈။ လိုချင်တဏှာ, စွဲမှီကာ၊ငါ့ဟာဟူ၍ သိမ်းပိုက်သည်။
၉။ လိုချင်ကင်းလျှင်, ငါ့ဟာပင်၊ထင်မြင် သိမ်းပိုက် ကင်းလေသည်။
၁ဝ။ ရုပ်နာမ်မရှိငြား, ဖဿငါး၊ထိပါးမရှိ ကင်းလေသည်။
၁၁။ အယူမှားဆုံးဖြတ်, အရပ်ရပ်၊ပယ်လတ်အားလုံး ကင်းစေသည်။
၁၂။ သို့ဖြစ်သူဟာ, လောကမှာ, ငြင်းကာမရှိ, ကင်းရသည်။
၁၃။ မြင် ကြား တွေ့ရ ကြံသိရ, ဓမ္မအားလုံးမှာ။
၁၄။ သေမင်းစစ်သည်, ကင်းလေပြီ, မုနိရဟန္တာ။
၁၅။ ဝန်ထုတ်ကင်းပ, ကိလေမှ, လွတ်ရကင်းရှင်းစွာ။
၁၆။ ကြံစည်တောင်းတ, ပျော်မှုမှ, လုံးဝကင်းရှင်းပါ။
၁၇။ ''ပေါ်တိုင်းမပြတ် ရှုမှတ်နေလျှင်၊
၈။ သီလဝန္တသုတ္တန်တရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ
၁။ သီလသုတာ, စုံသူမှာ, ဘယ်ဟာ ရှုအပ်ပါသနည်း
စွဲလမ်းနိုင်ရာ, ငါးခန္ဓာ, မှန်စွာရှုအပ်ပါသတည်း။
၂။ ဘယ်အကျိုးငှာ, ထိုခန္ဓာ, ဘယ်ခါရှုအပ်ပါသနည်း
၃။ လုံးစုံဓမ္မ, အနိစ္စ, ဒုက္ခအနတ္တာ။
၄။ ဤ၍ဤမျှ, ကြားဘူးက, သုတလုံလောက်ပါ။
၅။ Óဏ်ဖြင့်ရှေးရှု, ရုပ်နာမ်စု, မှတ်ûပသိလေရာ။
၆။ မမြဲဆင်းရဲ, သဘောပဲ, သိမြဲပိုင်းခြားကာ။
၇။ မမြဲဆင်းရဲ ရောဂါစွဲ, ပေါက်ကွဲအိုင်းတူသည်။
၈။ ငြောင့်မကောင်းမှု, ဖျားနာဟု မှတ်ရှု သူစိမ်းမည်။
၉။ သို့ရှုမြင်သန်, သောတာပန်, အမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။
၁ဝ။ ဖြစ်ခိုက်ရှုမှ, သဘာဝ, မုချ သိနိုင်သည်။
၁၁။ သဘောသိမှ, ဥဒယ, ဝယ မြင်နိုင်သည်။
၁၂။ သန္တတိ ဃန (က) ရှေးနောက်တရား ခဏပြားလျက်, ပိုင်းခြားမပြတ်, ငါကောင်မှတ်,
ခေါ်လတ်, သန္တတိ ဃနတည်း။
သမူဟ ဃန (ခ) ရုပ်နာမ်အများ, သဘောပြားလျက် ပိုင်းခြား မပြတ်, ငါကောင်မှတ်
ခေါ်လတ် ကိစ္စ ဃနတည်း။
အာရမ္မဏ ဃန (ဃ) နာမ်သဘောများ, အာရုံပြားလျက်, ပိုင်းခြား မပြတ်, ငါကောင်မှတ်,
ခေါ်လတ် အာရမ္မဏ ဃနတည်း။
၁၃။ ဖြစ်ခိုက်တရား, မပိုင်းခြား၍, လေးပါးဃန, ထင်ပေါ်က, အတ္တစွဲလမ်းသည်။
၁၄။ ဖြစ်ခိုက်တရား, ရှုပိုင်းခြား၍, လေးပါးဃန, ကြေပျက်မှ, အနတ္တÓဏ်ဖြစ်သည်။
၁၅။ Óဏ်မှန်အနတ္တ, ပြည့်စုံမှ, အရိယမဂ်Óဏ်ဆိုက်ရောက်သည်။
၁၆။ ပညတ်အနိစ္စ, သိရုံမျှ, အနတ္တ Óဏ်မပိုင်။
၁၇။ ပညတ်ဒုက္ခ, သိရုံမျှ, အနတ္တ Óဏ်မပိုင်။
၁၈။ ပရမတ်အနိစ္စ, သိမြင်မှ, အနတ္တ Óဏ်ပိုင်သည်။
၁၉။ ပရမတ်ဒုက္ခ, သိမြင်မှ, အနတ္တÓဏ်ပိုင်သည်။
၂ဝ။ လက္ခဏာစစ်တွင်, တစ်ခုမြင်, အကုန်သိတော့သည်။
၂၁။ ပျက်စီးသုည, အနတ္တ, ရှုရဆယ့်တစ်မည်။
၂၂။ သို့ရှုမြင်သန်, သောတာပန်, အမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။
၂၃။ သောတာမဂ်Óဏ်, ထူးခြားဟန်, ထုတ်ပြန် ဤသို့ ဖေါ်ပြသည်။
၂၄။ မပယ်ဘူးမြဲ, ကိလေခဲ, ဖေါက်ခွဲ ပယ်ခွင်းသည်။
၂၅။ ရုပ်နာမ်အစု, ငါကောင်ဟု, ထင်မှုမရှိပါ။
၂၆။ ရတနာသုံးပါး, သိက္ခာအား, ယုံမှားမရှိပါ။
၂၇။ သစ္စာမမြင်, မဂ္ဂင်မပါ, လေ့ကျင့်ကာဖြင့်, ချမ်းသာမြဲမည်, မယုံကြည်, ကန်ပြီ
၂၈။ အဆုံးမထင်, ဝဋ်ရေယဉ်, ကင်းစင်ခြောက်စေသည်။
၂၉။ အပါယ်လေးပါး, လမ်းပေါက်များ, တံခါး ပိတ်စေသည်။
၃ဝ။ ဗုဒ္ဓစွမ်းရည်, တွေ့မြင်ပြီ, ယုံကြည်မြဲလှစွာ။
၃၁။ ဓမ္မစွမ်းရည်, တွေ့မြင်ပြီ, ယုံကြည်မြဲလှစွာ။
၃၂။ သံဃစွမ်းရည်, တွေ့မြင်ပြီ, ယုံကြည်မြဲလှစွာ။
၃၃။ အရိယာကန္တ, ငါးသီလ, လုံးဝ ပြည့်စုံရာ။
၃၄။ မြတ်သောတာပန်, တရားမှန်, လေးတန်စုံလင်ရာ။
၃၅။ ကိုယ့်Óဏ်အဆင့်, ကိုယ်တိုင်ချင့်, အသင့်ဆုံးဖြတ်ရာ
၃၆။ အရိယာဥစ္စာ, ခုနှစ်ဖြာ, ကောင်းစွာရစေသည်။
၃၇။ အင်္ဂါရှစ်ပါး, မဂ်လမ်းမှား, ပယ်ရှားသုတ်သင်သည်။
၃၈။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း, ရှောင်ခွာတိမ်း, ကင်းငြိမ်းစေပါသည်။
၃၉။ ရွှေရင်တော်နှစ်, သားတော်ဖြစ်, စင်စစ်ရောက်စေသည်။
၄ဝ။ ရာပေါင်းများစွာ, နိသံသာ, သောတာမဂ်က ပေးပါသည်။
၄၁။ (က) ဆိတ်ငြိမ်ရာတွင်, ချဉ်းကပ်ဝင်၍, ဆင်ခြင်ရှုကြည့် ဖြစ်ပျက်မိ,
(ခ) ယထာဘူတ, မသိရအောင်, ထကြံလွှမ်းမိုး, ကိလေဆိုး ဖြစ်ရိုးမရှိပါ။
(ဂ) ဤသို့သိရ ပထမ ပစ္စဝေက္ခဏာ။
(ဃ) မဂ်သိပြီဟန်, ဝိပဿ်Óဏ်, ဖန်ဖန်မှီဝဲကာ၊
(င) အကြမ်းအနု, ကိလေစု, ငြိမ်းမှုထင်ရှားရာ၊
(က) ရှုမှတ်သိရ, ဤလမ်းမှ, ပြင်ပတခြားမှာ၊
(ခ) ကိလေသာငြိမ်းဘိ, မြတ်အရိ, မရှိဆုံးဖြတ်ရာ၊
၄၃။ (က) ကုစားနိုင်ကောင်း အာပတ်ပေါင်း, တိမ်းစောင်းရောက်သေးရာ၊
(ခ) မဖုံးကွယ်ပဲ, ကုစားမြဲ, နောက်လဲစောင့်ရိုးပါ၊
၄၄။ (က) ရှောင်လွှဲမရ, မှုကိစ္စ, ûပရလေသောအခါ၊
(ခ) သိက္ခာသုံးပါး ကျင့်ရန်ကား စိတ်အား သန်မြဲသာ။
၄၅။ (က) ဗုဒ္ဓဟောထား မြတ်တရား ဟောကြားရသောအခါ၊
(ခ) လုံးစုံမြ<ွကင်း, နှစ်လုံးသွင်း, နာခြင်း အားကောင်းစွာ။ ၄၆။ (က) ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား ဟောကြားရသောအခါ၊ (ခ) အနက်သိမြင်, စိတ်ကြည်ရွှင်, ကိုယ်တွင် သိမ့်သိမ့်ဖြာ။ (ဂ) ဤသို့သိရ သတ္တမ ပစ္စဝေက္ခဏာ။ ၄၇။ (က) ပစ္စဝေက္ခဏာ ခုနှစ်ဖြာ ညီစွာဖြစ်ပါမူ၊ (ခ) အရိယာမှန် သောတာပန် ဧကန်ဆုံးဖြတ်ယူ။ ၄၈။ (၁) သောတာပန်ကား, ဘယ်တရား, ရှုပွားအပ်သနည်း။ (၂) သောတာပန်လဲ, ခန္ဓာပဲ, ရှုမြဲနည်းတူသည်။ (၃) သို့ရှုမြင်သန်, သကဒါဂါမ်, အမှန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၄၉။ (၁) သကဒါဂါမ်ကား၊ ဘယ်တရား, ရှုပွားအပ်သနည်း။ (၂) သကဒါဂါမ်လဲ, ခန္ဓာပဲ, ရှုမြဲနည်းတူသည်။ (၃) သို့ရှုမြင်သန်, အနာဂါမ်, အမှန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၅ဝ။ (၁) အနာဂါမ်ကား၊ ဘယ်တရား ရှုပွားအပ်သနည်း။ (၂) အနာဂါမ်လဲ, ခန္ဓာပဲ, ရှုမြဲနည်းတူသည်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၅၉ (၃) သို့ရှုမြင်သန်, အရဟံ, အမှန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၅၁။ (၁) ရဟန္တာကား၊ ဘယ်တရား, ရှုပွားအပ်သနည်း။ (၂) ရဟန္တာလဲ, ခန္ဓာပဲ, ရှုမြဲနည်းတူသည်။ (၃) သို့ရှုသော်ငြား, သစ်ဟောင်းကား, တိုးပွား မရှိပြီ။ ၉။ တုဝဋ္ဋကသုတ် တရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ ၁။ ဆိတ်ငြိမ်တခို, ငြိမ်းရာကို၊ ဘယ်ကိုမြင်၍, ငြိမ်းသနည်း။ ၂။ အကျယ်ချဲ့လစ်, သူ့အမြစ်နှင့်, ငါဖြစ်သည့်သွင်, စိတ်ကြီးဝင်, သိမြင်လျက် ငြိမ်းစေသည်။ ၃။ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ, ဂုဏ်အရ, မာနမကြီးရာ။ သူတော်ကောင်းမှန်, ထိုသည့်မာန်, နိဗ္ဗာန် အငြိမ်းမဆိုပါ။ ၄။ မြတ် ယုတ် တန်းတူ, ဖြစ်သည်ဟူ, မာန်မူမûပ ကင်းစေရာ။ ကောင်းဆိုးများစွာ, တွေ့êကံကာ, ငါငါဟူ၍ မစွဲရာ။ ၅။ ကိုယ်တွင်း၌သာ, ငြိမ်းစေရာ, ပြင်မှာမရှာသင့်သည်ရာ။ ကိုယ်ထဲငြိမ်းက, မြဲအတ္တ, ကင်းပ ပြတ်အတ္တာ။ ၆။ သမုဒ်လယ်တွင်, လှိုင်းကင်းစင်, ရေပင်တည်သည့်, ပုံပမာ။ တဏှာကင်းစင်, တည်သည့်ပြင်, စည်ပင်ပွားများ, ကင်းစေရာ။ ၇။ မျက်မှောက်တရား, ဘေးပယ်ရှား, ဟောကြားခဲ့ပေပြီ၊ ပါတိမောက်နှင့်, စိတ်တည်လင့်, အကျင့် ဟောစေချင်ပါသည်။ျ ၈။ မျက်စိကစား, ရွာစကား, ရှောင်ရှား ကျင့်ရမည်။ ရသာမမက်, လောဘဘက်, နှစ်သက်မြတ်နိုး ပယ်ရမည်။ ၉။ အတွေ့ဆိုးများ, နှိပ်စက်ငြား, ညည်းတွား မြည်တန်း မûပရာ။ ၁ဝ။ စားသောက်ဖွယ်များ, ဝတ်အစား, သိမ်းထားမûပရာ။ ၁၁။ ဈာန်ကိုဝင်စား, လမ်းမများ, လှုပ်ရှားကုက္ကုစ် ကင်းရမည်။ ၁၂။ အိပ်မှုနည်းပါး, နိုးမှုများ, êကိးစားထက်သန်စေရမည်။ ၁၃။ အာတဗ္ဗဏာ, အိပ်မက်တာ, လက္ခဏာဟော, ကင်းရမည်။ နက္ခတ်ယှဉ်ဟန်, သားငှက်သံ, ကြံဖန်ဟောပြော, ကင်းရမည်။ ကိုယ်ဝန်တည်မှု, ဆေးဝါးကု, မûပ ကင်းရှင်းစေရမည်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၆ဝ ၁၄။ ကဲ့ရဲ့သော်လဲ, မလှုပ်ပဲ, မြှောက်လဲမမြောက် တည်ငြိမ်ရာ။ လောဘ ကောဓ, မစ္ဆေရ, ဘေဒ-ကုန်းချောကင်းစေရာ။ ၁၅။ အရောင်းအဝယ်, စွပ်စွဲဖွယ်, ငြိတွယ်ရွာ၌ မûပရာ။ လာဘ်ရစေရန်, စိတ်ရည်သန်, ဟန်ပန်ဆောင်၍ မပြောရာ။ ၁၆။ ဝြါ<ွကား ကိုယ်ကြမ်း, နှုတ်စိတ်ရမ်း, ဆိုးသွမ်းငြင်းခုံ မûပရာ။ ၁၇။ ကောက်ကျစ် ကင်းပ, မလိမ်ရ, နှိမ်ချ အထင်မသေးရာ။ ၁၈။ စွပ်စွဲခံရ, ကြားလတ်က, ချေပ ကြမ်းêကတ်-မûပရာ။ ကိလေငြိမ်းလျှင်, တုံ့ပြန်ချင်, စိတ်ပင်မဖြစ်, ငြိမ်းသည်သာ။ ၁၉။ ဤတရားသိလျှင်, ရှုဆင်ခြင်, အစဉ်မှတ်ဆက်, ကျင့်ရာသည်။ ကိလေသာ ငြိမ်းတာ, သန္တိပါ, သိကာမမေ့ ရှိရာသည်။ ၂ဝ။ နိုင်သာ နိုင်ပေ, မရှုံးပေ, မြင်လေမျက်မှောက် တရားတော်။ ထို့ကြောင့်အမြဲ, မမေ့ပဲ, ရှိလဲခိုးလျှက်ကျင့်ရာသော်။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် ပါဠိနိဿယ ဓမ္မဒေသနာ သံယောဇဉ် ၁ဝ-ပါး ဆောင်ပုဒ် ၁။ အာရုံငါးဝ, တပ်စွဲက, ကာမသံယောဇဉ်။ ၂။ သုံးပါးဘဝ, တပ်စွဲက, ဘဝသံယောဇဉ်။ ၃။ အမျက်ဒေါသ, စိတ်ဆိုးက, ပဋိဃသံယောဇဉ်။ ၄။ ကိုယ်သာတော်လှ, ထင်မှတ်က, မာနသံယောဇဉ်။ ၅။ ရုပ်နာမ်ကိုပဲ, ငါကောင်စွဲ, ယူလွဲဒိဋ္ဌိပင်။ ၆။ တရားမှန်တွင်, မယုံချင်၍, ဆင်ခြင်နှိုင်းညှိ, ဝေဖန်ကြည့်, ဝိစိကိစ္ဆာပင်။ ၇။ နွားခွေးတူစွာ, ကျင့်တာကောင်းမြတ်, ယူစွဲမှတ်, သီလဗ္ဗတပင်။ ၈။ ကိုယ့်ထက်သူများ, ကောင်းစားသည်ကို, မနာလို, ခေါ်ဆို ဣဿာပင်။ ၉။ ကိုယ်လိုသူများ, ကောင်းစားမည်မှ, ဝန်တိုက, မစ္ဆရိယပင်။ ၁ဝ။ သစ္စာလေးတန်, ပြောင်းပြန်ထင်ကာ, မသိတာ, အဝိဇ္ဇာသံယောဇဉ်။ ၁၁။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ, မလွတ်ရအောင်, ချည်နှောင်တတ်စွာ, ဤဆယ်ဖြာ, အဘိဓမ္မာသံယောဇဉ်။ မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ ၆၁ ၁၁။ လောကဓံ တရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ ၁။ လာဘ်ြေ>ွခရံရ, ချီးမွမ်းကြ, သုခ ဝမ်းသာမြဲ။
၂။ ထိုလေးမျိုးမှ, ပြောင်းပြန်ကျ, လောကဝမ်းနည်းမြဲ။
၃။ လောကဓမ္မ, ရှောင်မရ, မုချတွေ့စမြဲ။
၁။ ရုပ်နာမ်နှစ်ဝ, ကြောင်းêကိးမျှ, သိကစူသောတာ။
၂။ ဂတိမြဲရ, ပါယ်မကျ, မိန့်ဟ ဝိသုဓ်မှာ။
၁။ ကြောင်းကျိုးနှစ်ဝ, သိရုံမျှ, အားရမနေရာ။
၂။ ဆက်လက်ရှုက, ဖြစ်ပျက်မျှ, မုချသိနိုင်ပါ။
၃။ သိလျှင်သိလျှင်, မသိစင်, သိမြင် နိဗ္ဗူတာ။
၄။ နိဗ္ဗာန်မြင်က အပါယ်မှ, လုံးဝ လွတ်မြောက်ရာ။
၅။ ကိလေကုန်ခန်း နိဗ္ဗာန်နန်း, စံမြန်းနောက်ဆုံးမှာ။
၁။ တစ်နေ့ သုံးခါ, အိုးတစ်ရာဖြင့်, ချက်ခါထမင်း, ကျွေးလှူခြင်းထက်, မယွင်းစင်စစ်, နို့
တညစ်စာ, ကြိမ်သုံးခါမျှ, မေတ္တာပွားများ, ကျိုးကြီးမားသည်, ဘုရားမြတ်စွာ မိန့်ခွန်း
၂။ အိပ်နိုး, ချမ်းသာ, ကောင်းစွာ အိပ်မက်, ချစ်လျက် လူနတ်, စောင့်လတ် နတ်များ, မီးဆိပ်
-ဓားတို့, ရှောင်ရှားကိုယ်မှာ, လျင်စွာစိတ်တည်, ရွှင်ကြည်မျက်နှာ, သေကာမတွေ, လား
လေဗြဟ္မာ, ဆယ့်တစ်ဖြာသည်, မေတ္တာပွားမှု အကျိုးတည်း။
ကံနှင့် ကံ၏အကျိုး ဝေဖန်ချက်
၁။ သူ့ကိုသတ်ဖြတ်, သက်တိုတတ်, မသတ်အသက်ရှည်။
၂။ ညှဉ်းဆဲသူကား, အနာများ, သနားကျန်းမာသည်။
၃။ ဒေါသမီးလျှံ, အကျည်းတန်, သည်းခံ လှပသည်။
၄။ မနာလိုမှာ,ြေ>ွခရံကွာ, ကြည်သာြေ>ွခရံစည်။
၅။ မပေးလှူက, မွဲပြာကျ, လှူမှ ပြေါ<ွကယ်သည်။
၆။ မရိုမသေ, မျိုးယုတ်ချေ, ရိုသေမျိုးမြတ်သည်။
၇။ မမေးမမြန်း, Óဏ်မြင်ကန်း, စုံစမ်းÓဏ်ကြီးသည်။
၈။ ဆိုးတာûပက, ဆိုးတာရ, ကောင်းမှကောင်းစားသည်။
၉။ ဆိုးကောင်းနှစ်တန်, ကံစည်မံ, ခံ စံကြရသည်။
၁၃။ ကျောင်းအလှူ အနုမောဒနာတရားတော် ဆောင်ပုဒ်
၁။ ကိန်းအောင်းနေရန်, ချမ်းသာရန်,
၂။ ဈာန်ဝင်စားရန်, ရှုမှတ်ရန်,
၃။ ကျောင်းလှူသူဟာ, လုံးစုံပါ,
၄။ နေ့ညဉ့်မခြား, ကုသိုလ်များ,
၅။ ကျောင်းအလှူရှင်, တရားမြင်
၆။ ခုနစ်နှစ်-ခုနှစ်လ, ဝေလာမ,
၇။ ဆယ့်နှစ်ယူဇနာ, ကျယ်ပြန့်စွာ,
၈။ ရှစ်သောင်း လေးထောင်စီ, ဝတ်ကိုးမည်,
၉။ ရွှေခွက် ငွေခွက်, ကြေးစင်ခွက်,
၁ဝ။ နို့စားနွားမ, ပလ္လင်က,
၁၁။ ထိုတွင်ဝတ်ထည်, ကုဋေချီ,
၁၂။ သောတာပန်တစ်ပါး, ကျွေးလှူငြား,
၁၄။ ငွေရတုတရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ
၁။ သည်းခံကျင့်သုံး, အမြတ်ဆုံးပေ၊
ညှဉ်းဆဲက, သမဏ မဟုတ်ချေ။
၂။ သက်သတ်ခိုးလု, ကာမေသု၊
၃။ လိမ်လည်ကုံးချော, နှစ်မဲ့ပြော၊
၄။ မကောင်းမှုများ, ရှောင်ရှားပယ်လေ၊
၅။ သူ့ကိုယ်စွတ်စွဲ, ညှဉ်းဆဲကင်းစေ၊
ဤ ၆-ပါး, ဘုရားဆုံးမပေ။
Posted by Dhamma Vadi Aung Myay Mingalar Monastery at 6:52 PM
Labels: မဟာစည်ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ 03